काठमाडौं (पहिचान) माघ ९ – तेस्रोलिंगी महिला सिल्पा चौधरीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको आश्वासन दिने तर ब्यबहारमा नउतार्ने गरेको गुनासो गरेकी छन् । राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक समारोहमा मिठा कुरा गरे पनि ब्यबाहारमा भने उपेक्षा गर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
“यो संसार देखेर बिचित्र लाग्छ, म जस्तो अभागी कर्म भएको मान्छे देखेर । म अरु सरह महिला वा पुरुस भएर जन्मेको भए म सबैको माया ममता पाउँथे के गर्नु मेरो लागि न कुनै कानुन छ, न कुनै नियम छ,” उनी लेख्छिन्, “यो दुनिया देखेर थाकेँ । कहिले मेरो लागि कानुन बन्छ ? म कहिले अरु मान्छे सरह बाच्न पाउँछु ?।”
समाजमा कुनै काम गर्न खोज्दा कसैले पनि सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । कानुन अभावको कारण देखाउँदै सबै पन्छिने गरेको सिल्पाको गुनासो छ । “म जे काम गर्न खोज्दा पनि तेरो लागि कानुन नियम छैन भन्छन् । सबैले कहिले यो सरकार हाम्रा लागि कानुन बनाउँछ ? हरेक राजनीतिक दलले समाबेसीको कुरा गर्छन् । हरेक लिंगको मान्छे समान हुन् भन्दै भाषण गर्छन् तर किन हो ? भाषणमा मात्र सीमित ? कहिले ब्यबहारमा लागू गर्छन् ? ।”
उनले तेस्रोलिंगीलाई सँधै हाँसोको पात्र मात्रै बनाउने गरेको समेत बताएकी छन् । “म जस्तो तेस्रोलिंगी समुदायका मान्छे यो दुनियामा सधैंभरि हासोको पात्र मात्र बन्नुपर्छ । हाम्रो अस्तित्व कहाँ छ ? हाम्रो अधिकार कसले दिन्छ ? यसमा राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जाओस । म जस्तो व्यक्तिको अधिकार पनि अबको कानुनले समेटोस ।”
शिल्पालाई नेकपा एमालेले प्रदेश नम्वर ५ मा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार सिफारिस गरे पनि एमालेले शिल्पाको नाम बन्द सूचिमा राखेन । अहिले राष्ट्रिय सभा चुनावमा शिल्पालाई नाम छनौट गर्न एमाले जिल्ला कमिटीले लविङ गरिरहेको छ तर, एमाले नेतृत्वले सुनुवाई गरिरहेको छैन । यसैमा शिल्पाले असुन्तुष्टि र गुनासो व्यक्त गरेकी छन् ।